Maraykanka oo ay ku adkaan doonto inuu Diidmada Qayaxan ku difaaco Israel (Dib u habayn lagu samaynayo Golaha Ammaanka) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo ay ku adkaan doonto inuu Diidmada Qayaxan ku difaaco Israel...
Maraykanka oo ay ku adkaan doonto inuu Diidmada Qayaxan ku difaaco Israel (Dib u habayn lagu samaynayo Golaha Ammaanka)
(Hadalsame) 20 Abriil 2022 – QM oo kaddib Dagaalkii 2-aad loo dhisay inay ilaaliso nidaamka adduunka, ayaa waxaa ceebeeyey 5 dal oo leh Awoodda Qayaxan (P5) oo dhex fadhiya Golaha Ammaanka — Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Ingiriiska iyo Faransiiska — waana mid ka mid ah nidaamyada ugu cadaalad daran ee uu leeyahay urur caalami ah in dalal koobani ay yeeshaan awood ay “ku ilaashadaan danahooda qaran ee u gaarka ah”.
Tan iyo 1945-kii waxay dalalkani awooddaa adeegsadeen marar badan taasoo hor istaagtey in la oogo shuruucda caalamiga ah. Tan iyo 1946-kii, Soofiyeetkii hore oo gadaal ka noqday Ruushka, ayaa marka la isu geeyo adeegsadey 120 Fiito.
Yeelkeede, Maraykanka ayaa tan iyo 1970meeyadii, markii ay qabsashadii Israel ee Daanta Galbeed, Marinka Gaza iyo Bariga Quddus ay noqdeen doodda siyaasadda caalamiga ah, wuxuu noqday dalka ugu Fiito adeegsi badan isagoo isagoo 2 jeer ka batay Soofiyeetkii iyo Ruushka maanta.
Israel ayaa noqotay dal si joogto ah uga faa’iidaysta Fiitada Maraykanka isagoo helay 53 Fiito mana jiro dal tooxsiga intaa la’eg ka hela QM oo aan ahayn Yuhuudda.
ISBEDDEL HAATAN LA DAMACSAN YAHAY – Soo jeedintan oo ay iska kaashadeen 50 waddan. Waxa uu dhigayaa in xubnaha Golaha loo dhan yahay ay ku kulmaan “10 maalmood oo shaqo gudahood laga bilaabo mara ay dhacda codeynta Diidmada Qayaxan ee hal ama in ka badan oo xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka, si ay u qabtaan dood ku saabsan xaaladda ay ku dhacday diidmadaasi.”
Arrintan ayaa la sheegay in lagu xakamaynayo in si xun loo adeegsado awooddan, tusaale tan iyo markii Ruushku bilaabay duullaanka Ukraine bishii Febraayo, Golaha Guud wuxuu u codeeyay inuu tallaabo ka qaado Moscow saddex jeer, mar kasta se, Ruushka ayaa u diiday qaraarkaasi oo Feeto saarayey.
QM ayaa la filayaa inay maanta ka dooddo soo jeedintan. Haddii la ansixiyo waxa ay horseedi kartaa in dib u habayn lagu sameeyo Golaha Amaanka iyo awooda Diidmada Qayaxan ee P5 taasoo curyaamisay awoodii beesha caalamku ay ku difaaci lahayd dadka aduunka ugu nugul.
Dib u habayntan Qaramada Midoobey ayaa sidoo kale ku adkayn karta Maraykanka inuu diido dhaleeceynta iyo qaraarrada ka dhanka ah Israa’iil.
Previous articleDalka Ruushka oo daboolka ka qaaday inuu la imanayo HUB nooc cusub ah
Next articleFALANQAYN: Sida aanay Somalia marna u caawin doonin siyaasadda cusub ee ”Ciyaal Wirifaynta”